မြန်မာ အစားအစာတွေကို မြန်မာလိုပဲခေါ်ကြရအောင်လားဗျာ… In:Food History, Kawi Eats
“Yellow Sticky Rice” “Fish Noodle Soup” “Fish Paste” “Sticky rice with shredded coconut” “Pickled Tea Leaves Salad” မြန်မာအစားအစာတွေကို ဒီလို ဘာသာပြန်အသုံးပြုကြတာမျိုး ကျွန်တော်တို့ မကြာခဏမြင်တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မြန်မာမုန့်အကြောင်းရေးထားတဲ့ website တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အစားအသောက်ဆိုတာ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ ရိုးရာအစားအသောက်တွေကို ခေတ်အဆက်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာကြရင်း ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်း ကမ္ဘာမှာ မြန်မာမုန့်၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ပြန့်ပွားစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာ့အစားအစာတွေကို ခေါ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ မြန်မာလိုပဲခေါ်ရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေနားလည်အောင် ဘာသာပြန်တာကတော့ ပြန်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာသာပြန်ရင်းနဲ့ မြန်မာ့အငွေ့အသက်တွေ ပျောက်မသွားစေချင်တာပါ။ တခြားနိုင်ငံရဲ့မုန့်တွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ “ကင်မ်ချီ” လို့ခေါ်တာနဲ့ပဲစလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ ကင်မ်ချီလို့ဖတ်လိုက်တာနဲ့တင် စာဖတ်သူ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ချဉ်ဖတ်ကိုတွေးမြင်မိမယ်ဆိုတာ သေချာပေါက်ပြောရဲပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Pizza ဆိုရင်ကော? Spaghetti ဆိုရင်ကော? Hamburger ဆိုရင်ကော? Sushi ဆိုရင်ကော? Tom Yum ဆိုုရင်ကော? ဒီနာမည်တွေပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်ခုမှဘာသာပြန်ထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနာမည်တွေကို ကြားလိုက်တာနဲ့တင် ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်လိုအစားအစာဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းထဲမှာ မြင်မိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရသာရှိလှတဲ့ မြန်မာမုန့်တွေဆိုရင်ရော? မုန့်ဟင်းခါးကို “Fish Noodle Soup” ဆီထမင်းကို “Yellow Sticky Rice” ငါးပိကို “Fish Paste” ကောက်ညှင်းပေါင်းကို “Sticky Rice With Shredded Coconut” လက်ဖက်သုပ်ကို “Pickled Tea Leaves Salad” လို့မခေါ်စေချင်လောက်ပါဘူး။ မြန်မာမုန့်တွေက အရသာရှိပြီးထူးခြားပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေက မြန်မာ့ရိုးရာစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြန်မာ့အစားအစာတွေကို လက်ဆောင်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံလာလည်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို မိတ်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ့အစားအစာတွေ နာမည်တွင်ကျန်သွားအောင် မြန်မာလိုပဲခေါ်ဆိုသင့်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းမယ်ဆိုလည်း မြန်မာအသံထွက်အတို်င်းပေါင်းစေချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမှာ အစားအသောက်ဟာလည်း အင်မတန်အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာအစားအစာတွေကို မြန်မာလိုပဲ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာခေါ်ဆိုရင်း မိတ်ဆက်ကြရအောင်လားဗျာ။ ...
Wagyu Beef က ဘာကြောင့် ဒီလောက်စျေးကြီးနေတာလဲ? In:Food History, Kawi Eats
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Wagyu Steak ကိုကြားဖူးပါသလား? သင်ကြားဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ သူရဲ့စျေးနှုန်းလေးကိုလည်း သိမယ်ထင်ပါတယ်။ သူရဲ့စျေးနှုန်းက $30 ကနေ $3000 လောက်ထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီအသားက အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး beef ဖြစ်လို့ပါ။ Wagyu Beef က ကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံး beef လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ အသားရဖို့ Wagyu နွားတွေကို သေချာမွေးမြူရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစာအမြဲကျွေးထားပြီး သူတို့သောက်တဲ့ ရေကိုလည်း အမြဲသန့်စင်နေအောင် ပြုလုပ်ထားပေးရပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး အကောင်းမွန်ဆုံး အသားကို ရရှိိဖို့အတွက် သူတို့ကို စိတ်ဖိစီးမှုမရှိအောင်ပါ မွေးမြူရတာပါ။ သူတို့စားချင်တဲ့အချိန်မှာ စားလို့ရအောင် အစာရေစာကို အဆင်သင့်ပြင်ထားရတာပါ။ ပြီးတော့ Wagyu နွားတွေက သူတို့ကို ပွတ်သပ်ပြီး ကုတ်ပေးနေတာကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဒီ Wagyu Beef က အရမ်းစားလို့ကောင်းပါတယ်။ ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်တာနဲ့ အရည်ပျော်ဆင်းသွားသလို နှုးညံ့ပြီး အိနေတာပါတဲ့။ သင်တို့ မသေခင် စားကြည့်သင့်တဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကထည့်ထားလိုက်နော်။ စားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်းမှာရှိတဲ့ Horn Janpanese Bar & Restaurant ဆိုင်မှာ သွားစားကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။ ...
Vanilla က ဘာလို့ ငွေ(silver) ထက်တောင်စျေးကြီးတာလဲ In:Food History, Kawi Eats
Vanilla လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ရေခဲမုန့်ကို သွားပြေးမြင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် Vanilla ကိုရေခဲမုန့်မှာပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားနေရာတွေမှာလည်း အသုံးပြုကြပါသေးတယ်။ ဒိန်ချဉ်၊ ချောကလက်နဲ့ ရေမွှေးတွေမှာလည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်မှာပြောခဲ့သလို Vanilla က အရမ်းစျေးကြီးပါတယ်။ အလေးချိန်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် ငွေထည်(silver) ထက်တောင် ပိုပြီးစျေးကြီးပါသေးတယ်။ ဒါဆို Vanilla က ဘာလို့ဒီလောက်တောင် စျေးကြီးတာလဲ? စျေးကြီးရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက Vanilla ပင်တွေက ကြီးထွားနှုန်းနှေးလို့ပါ။ သူတို့က အပြည့်အဝကြီးထွားဖို့ဆိုရင် (၂)နှစ်ကနေ (၄)နှစ်လောက်အထိ အချိန်ယူပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့အပွင့်တွေက တစ်နှစ်မှာတစ်ရက်ပဲ ပွင့်ပါတယ်။(မြန်မာတို့ရဲ့ ပိတောက်ထက်တောင် ဆိုးသေးတယ်နော်) သူတို့အစေ့ကို ရယူနိုင်ဖို့ဆိုရင် ပွင့်တဲ့နေ့မှာပဲ ဝတ်မှုန်ကူးမှ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Vanilla တွေကြီးထွားတဲ့မြေမှာ ပျားတွေ၊ ငှက်တွေနဲ့ သဘာဝအတိုင်း ဝတ်မှုန်မကူးနိုင်တဲ့အတွက် လူတွေက ဝတ်မှုန်ကူးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးတဲ့ အခုလိုခေတ်ကြီးထဲမှာ ဒါကလည်း ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီတော့ ဝယ်အားနဲ့ ထုတ်လုပ်မှုအင်အားမမျှတော့တဲ့အတွက် တဖြည်းဖြည်းစျေးကြီးလာတာပါ။ ဒါက ရေခဲမုန့်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ သတင်းဆိုးတစ်ခုပါပဲ။ ...
စည်သွတ်ဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ? In:Food History, Kawi Eats
ဟုတ်ပါတယ်… ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ စည်သွတ်ဘူးလေးတွေရဲ့အကြောင်းပါ။ စည်သွတ်ဘူးအစားအစာတွေဆိုတာ နေ့စဉ်စားနေကြျဖစ်ပြီး လွယ်ကူစွာ အသင့်ဝယ်ယူစားသောက်နိုင်တဲ့ အစားအသောက်တွေပေါ့။ နောက်ပြီး.. သူတို့က အရသာလည်းရှိတယ််၊ ကြာရှည်လည်းခံတယ်လေ။ ဒါဆို ဒီစည်သွတ်ဘူးတွေက ဘယ်ကနေဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ? သင်တို့ စဉ်းစားကြည့်ဖြစ်ရဲ့လား ??? ဒီစည်သွတ်ဘူးနည်းပညာကို ၁၈ ရာစုနှစ်လောက်ကတည်းက ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ စပြီးရှာတွေ့ခဲ့တာပါ။ ဘယ်လို့စခဲ့တာလဲဆိုတော့… Napoleonic စစ်ပွဲဖြစ်နေစဉ် စစ်သားတွေရဲ့ ရိက္ခာပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ ဧရာဇ်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Napoleon Bonaparte က တိုင်းပြည်ကမည်သူမဆို အစားအသောက်တွေကို ကြာရှည်ခံအောင်လုပ်နိုင်ရင် ဆုငွေချီးမြှင့်မယ်ဆိုပြီး မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်နေ့မှာ Nicolas Appert ဆိုတဲ့ အရက်ချက်သမားတစ်ယောက်က အစားအသောက်တစ်ခုကို အလုံပိတ်ထားပြီးချက်ရင် အဖုံးမဖွင့်ချင်း ကြာရှည်စွာအထားခံတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့တွေ့ရှိမှုက စစ်သားတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပြီး သူ့အတွက်လည်း ဆုငွေများစွာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတွေ့ရှိချက်က UK ဘက်ကို ပေါက်ကြားသွားပြီး Peter Durand ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်က ဒီနည်းပညာကို အခြေယူပြီး စည်သွတ်ဘူးတွေကို စပြီးတီထွင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီး တဖြေးဖြေးနဲ့ စည်သွတ်ဘူးတွေကို ပိုပြီးအသုံးများလာကြပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ပိုပြီးနည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ စည်သွတ်ဘူးတွေကို ပိုပြီးကြာရှည်ခံအောင် လုပ်လာနိုင်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အစားအစာအမျိုးမျိုးကိုလည်း စည်သွတ်ဘူးနဲ့ ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ ...
Macaron (ခေါ်) ရိုတဲ့မုန့် In:Food History, Kawi Eats
Macaron ဆိုတာ နည်းနည်းတော့ ရိုတဲ့မုန့်လို့ပြောရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မုန့်လေးက နှှစ်ဖက်ပူးနေတာမို့လို့ပါ။ FA တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်။ ဟီး… နောက်တာပါ။ FA တွေလည်းစားလို့ရပါတယ်။ အားလုံး Macaron ကို စားဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူ့ကိုတစ်နည်းအားဖြင့် sandwich cookie လို့လည်း ခေါ်လို့ရပါသေးတယ်။ သူက ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ အခုနောက်ပိုင်းမှ နာမည်ကြီးလာတဲ့အစားအစာတစ်ခု ဖြစ်လာတာဆိုပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ (၈) ရာစုလောက်တည်းက ရှိနေခဲ့တာပါ။ Macaron ကို ပြင်သစ်ဘုရင် Henry II of France နဲ့သူရဲ့ ဘုရင်မတို့ လက်ထပ်ပွဲမှာ ဘုရင်မအတွက် အီတာလီစားဖိုမှုးတွေက ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၇၉၂ ခုနှစ်မှာ Carmelite သီလရှင်နှစ်ယောက်က Macaron ကို စတင်ရောင်းချခဲ့တာကြောင့် သူတို့သီလရှင်နှစ်ယောက်ကိုတောင် Macaron sisters ဆိုပြီး ခေါ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အစတုန်းကတော့ Macaron ဆိုတာ ကွတ်ကီးလိုမျိုး မုန့်လေးနှစ်ခုနဲ့ ယိုနဲ့သပ်သပ်စီပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မုန့်ကြားထဲမှာ ယိုကိုထည့်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ အရှေ့တောင်အာရှမှာသာမက အနောက်နိုင်ငံတွေမှာပါ နာမည်ကြီးလာတဲ့ အစားအစာတစ်ခုပါ။ မစားဖူးသေးရင်တော့ မြည်းစမ်းကြည့်သင့်တဲ့ မုန့်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ...
ကော်ဖီတစ်ခွက် ဘယ်လောက်ထိစျေးကြီးနိုင်လဲ? In:Food History, Kawi Eats
ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို ဘယ်လောက်ထိစျေးကြီးနိုင်မယ်လို့ သင်ထင်ပါသလဲ? ဘယ်လောက်စျေးကြီးမယ်ဆိုတာ မပြောပြခင် ဒီကော်ဖီလေးအကြောင်းကို အရင်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီကော်ဖီက ဂျပန်နိုင်ငံ The Münch Coffee ဆိုင်လေးမှာပဲရတဲ့ကော်ဖီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ The Münch Coffee ဆိုင်လေးကိုလည်း Kanji Tanaka ဆိုတဲ့ ဦးလေးတစ်ယောက်တည်းကပဲ တည်ထောင်ထားပြီး တစ်ယောက်တည်းလုပ်ရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကော်ဖီရဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သမိုင်းကြောင်းကတော့ Kanji Tanaka ဆိုတဲ့ဦးလေးကြီးက သူရဲ့ ကော်ဖီအေးတစ်ခွက်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ (၆) လလောက်မသောက်ဘဲ ပစ်ထားမိပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာတွေ့တော့ “ဟာ.. ဘာကြီးလဲ” ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မြည်းစမ်းကြည့်ရင်း ဘယ်လိုနေမလဲဆိုပြီး သောက်ကြည့်မိတာကနေ စတင်ခဲ့တာပါ။ အကြာကြီးသိမ်းထားတဲ့ ကော်ဖီတွေရဲ့ အကြောင်းကို သူစတင်သိသွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ Kanji Tanaka ဟာလုပ်ငန်းစတင်ပါတော့တယ်။ အခြားလိုအပ်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အရသာတွေကိုပေါင်းထည့်ဖို့ ကြိုးစားတာပါ။ ဒီလိုနှစ်တွေအကြာကြီးသိုလှောင်ထားတဲ့ ကော်ဖီအမှုန့်က အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကော်ဖီရဲ့အရောင်က အနက်ရောင်ဘက်ကို အရမ်းရောက်ပါတယ်။ ဝိုင်၊ သကြားရည်နဲ့ ချောကလက်တို့ ကော်ဖီထဲမှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်မှာပြောခဲ့အတိုင်း ဒီကော်ဖီက ဘယ်လောက်စျေးကြီးလဲဆိုတော့ $900 ကျော်ကျမှာပါ။ အဲ… မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့ ၁၄ သိန်းလောက်ကျမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ.. သောက်ကြည့်ချင်ကြလား? ...
ကျောက်ပုဇွန်တွေကို အရှင်ပြုတ်စားရတဲ့ အကြောင်းအရင်း In:Food History, Kawi Eats
များသောအားဖြင့်တော့ ဝက်တွေ၊ ကြက်တွေကို အရှင်လတ်လတ် အိုးထဲထည့်ပြီးတော့ ပြုတ်စားလေ့မရှိပါဘူူး။ ဒါပေမယ့် ကျောက်ပုဇွန်တွေ၊ ပုဇွန်တွေကိုတော့ အရှင်လတ်လတ် အိုးထဲ ထည့်ပြုတ်စားကြတာတွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒါကအထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ထောင်ကျော်လောက်တည်းက ပုဇွန်တွေကို အရှင်ပြုတ်စားခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ ကျောက်ပုဇွန်တွေကို အရှင်လတ်လတ် ပြုတ်စားကြတာလဲ? တကယ်တော့ ပုဇွန်တွေကို အရှင်ပြုတ်စားရတာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ပုဇွန်တွေက သေဆုံးသွားပြီးနောက် တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီအတွင်း ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ ဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီဘက်တီးရီးယားတွေက လူကိုအစာအဆိပ်သင့်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောက်ပုဇွန်တွေကို စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ အရှင်တွေမွေးထားပြီး ရောင်းတာပဲဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မေးခွန်းတစ်ခုက အရှင်ပြုတ်မယ်ဆိုရင် သနားစရာကောင်းတာပေါ့လို့ ပြောလာကြရင်တာ့ ဖြေရှင်းစရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုရင်တော့ ကျောက်ပုဇွန်တွေရဲ့ nervous system က နာကျင်မှုဆိုတာကို ခံစားနိုင်စွမ်းမရှိတာပါ။ အဲဒါကြောင့် အရှင်ထည့်ပြုတ်လိုက်ရင်လည်း သူတို့အတွက် နာကျင်မှုဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါကလည်းသေချာတဲ့အဖြေတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်တို့ ကျောက်ပုဇွန်တွေကို ဘာလို့အရှင်ပြုတ်စားကြတာလဲဆိုတာ သိသွားတာပေါ့နော်… ...
Ringo Ame ဆိုတာ ဘာကြီးလဲ? In:Food History, Kawi Eats
ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ Ringo Ame လို့ခေါ်တဲ့ ပန်းသီးသကြားလုံးကြီး အကြောင်းပါ။ ပန်သီးသကြားလုံးဆိုတာက ပန်းသီးအရသာနဲ့ သကြားလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဂျပန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ တွေ့နေကျ ပန်းသီးလုံးကြီးကို အနီရောင်ရှိတဲ့သကြားရည်တွေ လောင်းထားတဲ့ ပန်းသီးသကြားလုံးကြီးတွေပါ။ ဒီပန်းသီးသကြားလုံးတွေက ဂျပန်မှာဆို အရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ ပွဲတော်အစားအစာတစ်မျိုးပါ။ ဘယ်ဂျပန်ရာသီပွဲတော်မှာမဆို သူ့ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်ရာသီပွဲတော်လို့ကြားတာနဲ့ ကီမိုနိုလေးဝတ်ပြီး ပန်းသီးသကြားလုံးကိုကိုင်ထားပြီး သိပ်ကိုအိန္ဒြေရှိလှပတဲ့ ဂျပန်မလေးတွေကို မြင်ယောင်မိကြမှာပါ။ ပန်းသီးသကြားလုံးအပေါ်မှာ လောင်းထားတဲ့သကြားရည်ကတော့ သကြား၊ ကော်ရည်၊ သစ်ကြမ်းပိုးအမှုန့်နဲ့ အနီရောင်ဆိုးဆေးအနည်းငယ် ထည့်ပြီးလုပ်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီပန်းသီးသကြားလုံးကြီးတွေက ဂျပန်ပွဲတော်တွေရဲ့မရှိမဖြစ် မုန့်အချိုတစ်ခုဆိုပေမယ့် သူကဂျပန်မှာစပြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကို ပထမဦးဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တာက 1908 ခုနှစ်လောက်ကတည်းက Newark မြို့က သကြားလုံးလုပ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Willian W. Kolb ဆိုတဲ့လူက စပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ သူစလုပ်ခဲ့တုန်းကတော့ သိပ်ပြီးမရောင်းခဲ့ရပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူသိများလာခဲ့ပြီး ဆပ်ကပ်တွေ၊ သကြားလုံးဆိုင်တွေမှာပါ ရောင်းလာကြတယ်လေ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ပန်းသီးသကြားလုံးက တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ နာမည်တွင်ခဲ့တာပါ။ သူတို့ကိုဒေသအလိုက် ကွဲပြားစွာစားသုံးကြပါတယ်။ ဥပမာ- တရုတ်ပြည်မှာဆို Tanghulu လို့ခေါ်ပြီး သူတို့ကပန်းသီးမသုံးဘဲ စားရလွယ်တဲ့ အသီးသေးသေးလေးတွေကို သုံးကြပါတယ်၊ ပြင်သစ်မှာဆို သူတို့ကို Pommes D’amour (အချစ်ပန်းသီး) လို့ခေါ်ပြီး ပွဲတော်တွေမှာ အများအားဖြင့် ချစ်သူစုံတွဲတွေစားကြတာပါ၊ အိုင်ယာလန် နဲ့ UK မှာဆိုလည်း Halloween အစားအစာတစ်ခုအနေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာလည်းစားကြပါတယ်။ ...
Blue Ramen ဆိုတဲ့ အပြာရောင် (ရာမန်) ခေါက်ဆွဲ In:Food History, Kawi Eats
ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမယ့် အစားအစာတစ်ခုကတော့ Tokyo’s Blue Ramen အကြောင်းလေးပါ။ Blue Ramen ဆိုတဲ့အတိုင်း သူကအပြာရောင်လေးပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံ Tokyo မြို့ရဲ့ Kipposhi ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲရှိတာပါ။ ဂျပန်မှာဆို သူ့ရဲ့အရောင်နဲ့အရသာ ဆွဲဆောင်မှုတွေကြောင့် လူသိများပြီးနာမည်ကြီးတဲ့ ramen တစ်မျိုးပေါ့။ Ramen ဆိုတာက ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရိုးရာအစားအသောက်တစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ လူတိုင်းလည်းကြိုက်ကြပါတယ်၊ စားလို့လည်းဂွတ်ရှယ်ပဲ ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ပဲကြိုက်ကြိုက် ကြာလာရင်ရိုးအီသွားကြတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် Blue Ramen ကတော့မတူဘူးနော်!! သာမန်ramen တွေနဲ့မတူတဲ့အရည်အသွေးရှိပြီး ramen soup ရဲ့အရသာက လေးလေးပင်ပင်လေးနဲ့ စားရတာပိုအရသာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း နာမည်ကြီးတာလေ။ သူ့ရဲ့စွတ်ပြုတ်အရောင်က အပြာရောင်လေးပါ။ ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မိုးပြာရောင်လေးပေါ့။ ဘယ်လောက်ထိလှလဲဆိုရင် မြင်လိုက်တာနဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ ပြာလဲ့နေတဲ့ Hawaii ကမ်းခြေကြီးကို ပြေးမြင်မိသလောက်ပါပဲ။ စွတ်ပြုတ်ရည်က ramen ဆိုတဲ့အတိုင်း ကြက်သားပြုတ်ရည်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာပါ။ ထူဆန်းတာတစ်ခုက အခုလိုကြက်ပြုတ်ရည်ကိုကြည်အောင်လုပ်ပြီး အပြာရာင်လေးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတာပါပဲ?? ဒါလေးကတော့ ဘယ်လောက်ရှာရှာမသိရတဲ့ Kipposhi ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးရဲ့လျှိဝှက်ချက်လေးပါ။ သိချင်လိုက်တာနော်! နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုက ခေါက်ဆွဲလေးတွေပါပြာသွားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အရသာကို မဆုံးဖြတ်လိုက်နဲ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Kipposhi ရဲ့စားဖိုမူးကြီးက စွတ်ပြုတ်လေးကိုပဲဆန်းအောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ ramen ရဲ့ဒုတိယအဓိကဖြစ်တဲ့ခေါက်ဆွဲကိုပါ ပါးပါးသေးသေးလေးတွေသုံးပြီးချက်ထားတာပါ။ ခေါက်ဆွဲလေးတွေကမပျော့၊ မမာ အနေအထားမှာရှိပြီး ဝါးလို့လည်းကောင်း၊ ဝါးလိုက်တိုင်းလည်းစွတ်ပြုတ်အရသာလေးတွေ ခေါက်ဆွဲပင်လေးတွေထဲကထွက်လာတာကို ခံစားရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ သိပ်ကိုအရသာရှိမှာပဲနော်! နောက်ပြီးတော့ ကြက်သားနဲ့တွဲစားရတာဆိုတော့ စားလို့လည်းကောင်းတဲ့အပြင် ဝက်ဝမ်းဗိုက်သားနဲ့စားတာထက် ပိုပြီးတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်ပါတယ်။ ဒီ Blue Ramen လေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးဆိုပေမယ့် ဂျပန်ကိုလမ်းကြုံရင် ဝင်စားကြည့်လို့ရအောင်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ...